Booliiska Sweden iyo Finland oo wadoshaqeyn yeelanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliiska Sweden iyo Finland oo wadoshaqeyn yeelanaya
La daabacay måndag 19 januari 2015 kl 11.37
Waxaa la qorsheynayaa in booliiska Sweden iyo kan Finland ay wadoshaqeeyan. Waxaa gacanta lagu hayaa wax ka bedelid lagu sameynayo sharciga si loogu sahlo wadoshaqeynta labada booliis iyada oo imminka tababar la siinayo booliiska labada dal ee ka howlgala Norrland iyo Lappland oo ah halka Sweden iyo Finland ku leeyahiin xaduud dhul ah oo dhirirkeedo yahay 40 mil.
Wadoshaqeynta labada booliis ayaa ahaan karta in ay rondooyey wadojir u sameeyaan iyada oo loo sahli doono in ciidanka Finland howlgal kasameyn karo gudaha Sweden halka sidoo kale booliska Sweden uu asna sidoo kale sameyn karo.
Ciidanka labada dal ee wadoshaqeynta yeelanaya ayaa tiradooda tahay 150 booliis. Qorshana waxuu yahay in ay wadoshaqeynta billaabanto dayrta soo socota. Ka hor inta aysan labada ciidan wdoshaqeytooda billaaban waxaa la siin doonaa waxbrasho aqoon korarsi oo ku sabsan sharciyada labada dal iyo weliba luuqadaha kalogedisan ee labada dal.